Lwesithathu 8 Juni 2022
Indlu Yindawo yokuhlala eyenziwe ngezifiso ngokususelwa kubasebenzisi. Isikhala esivulekile sendlu sixhumanisa igumbi lokuhlala, igumbi lokudlela nendawo yokufunda ngokusebenzisa ukugeleza kwenkululeko, futhi kuletha nokuluhlaza nokukhanya okuvela kuvulandi. Isango elikhethekile lesilwane ungalithola egumbini ngalinye lomndeni. Ukugeleza kwethrafikhi nokungahambi kahle kungenxa yendlela eyakhelwe ngayo umnyango. Ukugcizelelwa kwemiklamo engenhla kufanele yakhelwe ukuhlangana nemikhuba yabasebenzisi, ukuhlangana kwe-ergonomic nokudala kwemibono.
Lwesibili 7 Juni 2022
Salon Ubuhle Umklami wayehlose indawo eyisikhukhula futhi ekhuthazayo futhi akhiqize izikhala ezihlukile ezinemisebenzi ehlukene, okuyizikhathi ezifanayo izingxenye zesakhiwo sonke Umbala weBegege njengomunye wemibala ye-Deluxe yase-Iran wakhethwa ukuthuthukisa umbono weprojekthi.The Izikhala zivela ngezindlela zamabhokisi ngemibala eyi-2. Amabhokisi la avaliwe noma avaliwe ngaphandle kokuphazamiseka okuphathelene nokuziphatha noma ikhandlela.Ikhasimende lizoba nendawo eyanele yokuthola i-catwalk yangasese.Izibane ezikhanyayo, ukukhetha kwesitshalo okulungile nokusebenzisa umthunzi ofanele imibala yezinye izinto ezisetshenziswayo kwakuyizinselele ezibalulekile.
Indawo Yokudlela Ukuba yi-Shabu Shabu, idizayini yokudlela yemukela izinkuni, imibala ebomvu nemhlophe ukwethula umuzwa wendabuko. Ukusetshenziswa kwemigqa ye-contour elula kugcina ukunakwa okubonakalayo kwamakhasimende emilayezweni yokudla neyokudla eboniswayo. Njengoba ikhwalithi yokudla iyinto ebaluleke kakhulu, indawo yokudlela ihlelwa ngezinto ezintsha zemakethe zokudla. Izinto zokwakha ezinjengodonga nosimende naphansi zisetshenziselwa ukwakha imuva lasemakethe lekhawunta yokudla entsha entsha. Lokhu kusetha kulingisa imisebenzi yangempela yokuthenga emakethe lapho amakhasimende angabona khona ikhwalithi yokudla ngaphambi kokwenza izinqumo.
Isitolo Sobuciko I -uriur ihlanganisa ipulatifomu yokuthengisa ye-inthanethi exhunywe kulesi sitolo sokuqala somzimba esibonisa ukukhethwa kwemfashini, ukwakhiwa, imikhiqizo eyenziwe ngezandla nomsebenzi wobuciko. Ngaphezu kwesitolo sokuthengisa esivamile, i-Kuriosity yakhelwe njengesipiliyoni sokutholakele lapho imikhiqizo eboniswayo inezelwe ngesendlalelo esingeziwe semidiya ecebile esebenzisana ukuheha nokuzibandakanya nekhasimende. Iwindows of infuri box infact box kaKuriosity ishintsha umbala ukuheha futhi lapho amakhasimende edlula, imikhiqizo ecashile emabhokisini angemuva kwamalambu engilazi engabonakali engenamkhawulo ebamema ukuba bangene.
Ukwakhiwa Okuxubekile IGaia iseduze kwesakhiwo sikahulumeni esivele sihlongoziwe esihlanganisa indawo yokumisa yedolobha, inxanxathela enkulu yezitolo kanye nepaki yedolobha ebaluleke kakhulu. Lesi sakhiwo esisetshenziselwa ukuxubeka ngokuhambisana nokunyakaza kwaso sisebenza njengento eheha izakhamizi zamahhovisi kanye nezindawo zokuhlala. Lokhu kudinga ukusebenzisana okuguquliwe phakathi kwedolobha nokwakha. Izinhlelo ezahlukahlukene zisebenza ngokuqinile ngendwangu yendawo usuku lonke, ibe yisikhuthazo kulokho okuzobe kungenzeki ngokushesha kube yi-hotspot.
FinaMill Smart Ekhishini Isigayo Sonto 26 Juni
Catzz Umbhede Wekati Mgqibelo 25 Juni
Perception I-Cafe Lwesihlanu 24 Juni
Indlu Salon Ubuhle Indawo Yokudlela Isitolo Sobuciko Ukwakhiwa Okuxubekile Ihhovisi Lokuthengisa Liwuhlobo